သင်နားလည်လက်ခံထားတဲ့အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုများလဲ ? – Trend.com.mm
သင်နားလည်လက်ခံထားတဲ့အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုများလဲ ?
ထာဝရတည်ရှိနေမယ့်အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးချင်လောက်အောင် ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်သင့်မှာရှိပါသလား?တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ထဲမှာ အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတစ်ယောက်တော့ရှိပါတယ်။နာမည်ကျော်ကဗျာစာပေလေ့လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်သူHelen Fisher ကတော့ အချစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို လေ့လာခဲ့ပြီး သူမကပဲ Mayan King တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hasaw ChanK’awilဆိုသူအမျိုးသားတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဘုရင် Hasaw Chan K’awil ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ထောင်စုနှစ်လယ်ပိုင်းလောက်က အခု Guatemala အဖြစ်လူသိများတဲ့နေရာမှာ သူ့ရဲ့ ချစ်လှစွာသောဇနီးအတွက် ဘုရားကျောင်းတစ်ခု
ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူက သူ့ထက်အရင်ဆုံးပါးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်မေ့ သတိရတဲ့အတွက် အမှတ်တရအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဘုရားကျောင်းတည်ဆောက် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ ဘုရင် Hasaw Chan K’awil က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘုရား ကျောင်းကိုဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ဘုရားကျောင်းဆောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ဆောက် ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ထာဝရမြင်တွေ့နေရပါပြီတဲ့။
Helen Fisher ဟာ ဒီအကြောင်းကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပြီး အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်ရှိကြောင်းကို သက်သေပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူသားတိုင်းဟာ အသက်ရှင်ဖို့နဲ့ တိုးတက်ကြီးပွားဖို့အတွက် အချစ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။သူ့မရဲ့ အဆိုအရ အချစ်ဆိုတာ ဖန်တီးမှုအရင်းအမြစ်
တစ်ခု၊ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူအများစုဟာ အချစ်အတွက်ကြောင့်ပဲ သီချင်းတွေဆိုကြတယ်၊ပျော်ရွှင်ကခုန်ကြတယ်၊ သီချင်းတွေဖန်တီးကြတယ်။အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒဏ္ဏာရီတွေ၊ရှေးရိုးစကားတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အချစ်စစ်မှာ အလှတရားတွေအားလုံးပါဝင်သလို နာကျင်မှုတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက နာကျင်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။အချစ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကသာ နာကျင်ရတာပါ။အချစ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါနှလုံးသားထဲကနာကျင်လာပြီး လက်တွေ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက နှလုံးသားကိုပါတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နာကျင်လာစေပါတယ်။ အချစ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်မက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါထိခိုက်လာစေတာပါ။
ဒီလိုနာကျင်စရာတွေ၊၀မ်းနည်းစရာတွေရှိတဲ့အချစ်ဆိုပေမဲ့လည်း လူသားတိုင်းက Julia Robert ရဲ့ ဇာတ်ကောင် Shelby ပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံသဘောတူနေဆဲ့ပါ။သူမ ဘာပြောခဲ့တာလဲ ဆိုတော့ “ဘာထူးခြားတဲ့ခံစားချက်မှမရှိပဲတစ်ဘ၀လုံးနေရမှာထက် အံ့သြဆန်းကြယ်မှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့မိနစ်သုံးဆယ်စာပဲပိုပြီးလိုချင်တယ်”လို့ပြောခဲ့တာပါ။လူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ရပ်တန့်လို့မရတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုရလိုက်သလိုပါပဲ။ပျော်ရွှင်ရမယ်၊ ကံကောင်းမှုတွေ ခံစားရမယ်၊တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးလူတစ်ယောက်လိုခံစားချက်မျိုးရမယ်၊လုံခြုံမှုနဲ့ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်လိုက်ချင်တဲ့နွေးထွေးမှုတွေရစ်ပတ်နေတာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့များ သင်က တစ်စုံတစ်ယောက်ချစ်တယ်ဆိုပါစို့၊သူ့ကိုလည်းဖွင့်ပြောပြီး သူမကလည်း သင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် သင့်ဆီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေ၊နွေးထွေးမှုတွေကို ဝေမျှလိုက်ပါ။သူမ (သူ)က သင့်အပေါ်ဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးနိုင်လဲဆိုတာပြောပြလိုက်ပါ။သင့်ခံစားချက်တွေကို ရိုးသားမှုရှိပါ။
အချစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဒီအချက်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ သင့်ရဲ့ခံစားချက် အစစ်အမှန်တွေကိုသင်ချစ်တဲ့သူတွေဆီကို ရိုးသားစွာဖွင့်ပြောပါ။သင့်ရဲ့ တကယ့်နှလုံးသားထဲက စိတ်ရင်းစိတ်မှန်က ဘာလဲဆိုတာပြောပြပါ။သင့်ကိုဘာကပျော်ရွှင်စေပြီးဘာက ၀မ်းနည်းစေလဲဆိုတာ ကို ပြောပြပါ။တစ်ခါတစ်လေ အချစ်ဆိုတာ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခံစားချက်အစစ်အမှန်တွေကို ချစ်တဲ့သူကိုဖွင့်ပြောရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်မိနေသလိုဖြစ်လို့ပါပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ခံစားချက်
အဲ့ဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အချစ်စစ်နဲ့ချစ်မိသွားတဲ့အခါ သင့်ခံစားချက်တွေ အပေါ်ရိုးသားပါ။ခံစားချက်အစစ်အမှန်တွေကိုဖွင့်ပြောပြပါ။အချစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သင့်ကိုယ်သင်စီးမျောခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ရခြင်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ်ခံစားပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။
အချစ်စစ်ဆိုတာ လှပတဲ့အရာတစ်ခုပါ။အဆုံးသတ်လှပသည်ဖြစ်စေ၊မလှပသည်ဖြစ်စေ အချစ်စစ်ဆိုတာကိုခံစားပိုင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ ဘ၀ရဲ့ အလှပဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အဖြစ်ဆေးခြယ်နိုင်ကြပါစေလို့…
ထာဝရတညျရှိနမေယျ့အထိမျးအမှတျကြောကျတိုငျတဈခုတညျဆောကျပေးခငျြလောကျအောငျ ခဈြခငျမွတျနိုးရတဲ့တဈစုံတဈယောကျသငျ့မှာရှိပါသလား?တကယျ့လကျတှဘေ့ဝထဲမှာ အဲ့ဒီလိုလူမြိုးတဈယောကျတော့ရှိပါတယျ။နာမညျကြျောကဗြာစာပလေလေ့ာသူတဈယောကျဖွဈတဲ့ အမရေိကနျသူHelen Fisher ကတော့ အခဈြဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျကို လလေ့ာခဲ့ပွီး သူမကပဲ Mayan King တဈယောကျဖွဈတဲ့ Hasaw ChanK’awilဆိုသူအမြိုးသားတဈယောကျအကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ဘုရငျ Hasaw Chan K’awil ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ထောငျစုနှဈလယျပိုငျးလောကျက အခု Guatemala အဖွဈလူသိမြားတဲ့နရောမှာ သူ့ရဲ့ ခဈြလှစှာသောဇနီးအတှကျ ဘုရားကြောငျးတဈခု
ကိုတညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။ဇနီးဖွဈသူက သူ့ထကျအရငျဆုံးပါးသှားခဲ့တာဖွဈပွီးအောကျမေ့ သတိရတဲ့အတှကျ အမှတျတရအထိမျးအမှတျအဖွဈဘုရားကြောငျးတညျဆောကျ ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာ ဘုရငျ Hasaw Chan K’awil က သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျဘုရား ကြောငျးကိုဇနီးဖွဈသူရဲ့ ဘုရားကြောငျးဆောငျနဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျတညျဆောကျ ခဲ့ပါတယျ။အခုဆိုရငျ သူတို့နှဈယောကျက တဈယောကျမကျြနှာတဈယောကျထာဝရမွငျတှနေ့ရေပါပွီတဲ့။
Helen Fisher ဟာ ဒီအကွောငျးကိုရေးသားပွုစုခဲ့ပွီး အခဈြစဈဆိုတာ တကယျရှိကွောငျးကို သကျသပွေခဲ့တာဖွဈပါတယျ။လူသားတိုငျးဟာ အသကျရှငျဖို့နဲ့ တိုးတကျကွီးပှားဖို့အတှကျ အခဈြကိုလိုအပျပါတယျလို့ပွောထားပါတယျ။သူ့မရဲ့ အဆိုအရ အခဈြဆိုတာ ဖနျတီးမှုအရငျးအမွဈ
တဈခု၊ဖနျတီးမှုဆိုငျရာလုပျငနျးတှအေတှကျလိုအပျခကျြတဈခုပါတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူအမြားစုဟာ အခဈြအတှကျကွောငျ့ပဲ သီခငျြးတှဆေိုကွတယျ၊ပြျောရှငျကခုနျကွတယျ၊ သီခငျြးတှဖေနျတီးကွတယျ။အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီးဒဏ်ဏာရီတှေ၊ရှေးရိုးစကားတှလေညျးအမြားကွီးရှိခဲ့ပါတယျ။အခဈြစဈမှာ အလှတရားတှအေားလုံးပါဝငျသလို နာကငျြမှုတှလေညျးပါဝငျနိုငျပါတယျ။
တကယျတော့ အခဈြဆိုတဲ့အရာက နာကငျြစတောမဟုတျပါဘူး။အခဈြကိုဆုံးရှုံးလိုကျရတာကသာ နာကငျြရတာပါ။အခဈြကိုဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့အခါနှလုံးသားထဲကနာကငျြလာပွီး လကျတှေ့ ခန်ဓာကိုယျထဲက နှလုံးသားကိုပါတိုကျရိုကျဆကျသှယျနာကငျြလာစပေါတယျ။ အခဈြကိုဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့အခါစိတျပိုငျးဆိုငျရာတငျမက ရုပျပိုငျးဆိုငျရာတှပေါထိခိုကျလာစတောပါ။
ဒီလိုနာကငျြစရာတှေ၊ဝမျးနညျးစရာတှရှေိတဲ့အခဈြဆိုပမေဲ့လညျး လူသားတိုငျးက Julia Robert ရဲ့ ဇာတျကောငျ Shelby ပွောတဲ့စကားကိုလကျခံသဘောတူနဆေဲ့ပါ။သူမ ဘာပွောခဲ့တာလဲ ဆိုတော့ “ဘာထူးခွားတဲ့ခံစားခကျြမှမရှိပဲတဈဘဝလုံးနရေမှာထကျ အံ့သွဆနျးကွယျမှုတှေ ပွညျ့နှကျနတေဲ့မိနဈသုံးဆယျစာပဲပိုပွီးလိုခငျြတယျ”လို့ပွောခဲ့တာပါ။လူတဈယောကျကိုခဈြမိသှားတဲ့အခါမှာ ရပျတနျ့လို့မရတဲ့လကျဆောငျတဈခုရလိုကျသလိုပါပဲ။ပြျောရှငျရမယျ၊ ကံကောငျးမှုတှေ ခံစားရမယျ၊တဈကမ်ဘာလုံးမှာအပြျောရှငျဆုံးလူတဈယောကျလိုခံစားခကျြမြိုးရမယျ၊လုံခွုံမှုနဲ့ဘယျတော့မှ လကျမလှတျလိုကျခငျြတဲ့နှေးထှေးမှုတှရေဈပတျနတောကိုခံစားရပါလိမျ့မယျ။
တကယျလို့မြား သငျက တဈစုံတဈယောကျခဈြတယျဆိုပါစို့၊သူ့ကိုလညျးဖှငျ့ပွောပွီး သူမကလညျး သငျ့ကိုခဈြတယျဆိုရငျ သငျ့ဆီမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ခံစားခကျြတှေ၊နှေးထှေးမှုတှကေို ဝမြှေလိုကျပါ။သူမ (သူ)က သငျ့အပျေါဘယျလောကျထိလှမျးမိုးနိုငျလဲဆိုတာပွောပွလိုကျပါ။သငျ့ခံစားခကျြတှကေို ရိုးသားမှုရှိပါ။
အခဈြဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျနဲ့ပတျသကျလာရငျ ဒီအခကျြကအရေးကွီးဆုံးပါပဲ။ သငျ့ရဲ့ခံစားခကျြ အစဈအမှနျတှကေိုသငျခဈြတဲ့သူတှဆေီကို ရိုးသားစှာဖှငျ့ပွောပါ။သငျ့ရဲ့ တကယျ့နှလုံးသားထဲက စိတျရငျးစိတျမှနျက ဘာလဲဆိုတာပွောပွပါ။သငျ့ကိုဘာကပြျောရှငျစပွေီးဘာက ဝမျးနညျးစလေဲဆိုတာ ကို ပွောပွပါ။တဈခါတဈလေ အခဈြဆိုတာ ကွောကျဖို့ကောငျးတယျ လို့ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခံစားခကျြအစဈအမှနျတှကေို ခဈြတဲ့သူကိုဖှငျ့ပွောရတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျထိခိုကျနာကငျြအောငျလုပျမိနသေလိုဖွဈလို့ပါပဲတဲ့။ဒါပမေဲ့ မမှနျကနျတဲ့ခံစားခကျြ
အဲ့ဒါကွောငျ့ တဈစုံတဈယောကျကို အခဈြစဈနဲ့ခဈြမိသှားတဲ့အခါ သငျ့ခံစားခကျြတှေ အပျေါရိုးသားပါ။ခံစားခကျြအစဈအမှနျတှကေိုဖှငျ့ပွောပွပါ။အခဈြဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျအောကျမှာ သငျ့ကိုယျသငျစီးမြောခှငျ့ပေးလိုကျပါ။ပွီးတော့ အသကျရှငျသနျနထေိုငျရခွငျးတှထေဲမှာ အကောငျးဆုံးအတှအေ့ကွုံတဈခုအဖွဈခံစားပြျောရှငျလိုကျပါ။
အခဈြစဈဆိုတာ လှပတဲ့အရာတဈခုပါ။အဆုံးသတျလှပသညျဖွဈစေ၊မလှပသညျဖွဈစေ အခဈြစဈဆိုတာကိုခံစားပိုငျဆိုငျနရေတဲ့အခြိနျမှာ ဘဝရဲ့ အလှပဆုံး အစိတျအပိုငျးတဈခု အဖွဈဆေးခွယျနိုငျကွပါစလေို့…
Leonardo Dicaprioက ဘယ်လိုအရာတွေပေါ်မှာပဲ ပိုက်ဆံဖြုန်းလေ့ရှိလဲ ?